नेपाल आज | सांसदको गर्जन लोकसेवा संसद भन्दा ठूलो हो ?
सांसदको गर्जन लोकसेवा संसद भन्दा ठूलो हो ?
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन स्थगन नगरेको भन्दै विहीबारको संसद बैठकमा पनि सांसद्हरुले लोकसेवा आयोगप्रति कटाक्ष पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बिमला बिकले संविधानले समानुपातिक समावेशीको हक प्रत्याभुति गरेको बताउनुभयो ।
संविधानले प्रत्याभूति गरेको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “के नेपालमा लोकसेवा आयोग संसद भन्दा ठुलो हो ? के लोकसेवा आयोग सञ्चालन गर्ने ऐन निर्देशिकाहरु संविधानभन्दा ठुला हुन त ?”
लोकसेवा आयोगले गत १५ गते स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि सांसदहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । संसदीय समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन नै दिइसकेको भएपनि लोकसेवाको बैठक बसेको छैन ।